Heerka Nacnaca Crush 677 khiyaamo iyo talooyin - Ciyaarta Suugaanta Shumaca - Talooyin Khayaanada Nolosha Bilaashka ah Tilmaamaha
halkan ayaad joogtaa: Guriga / Uncategorized / Heerka Nacnaca Crush 677 khiyaamo iyo talooyin
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Julaay 12, 2021 By Isabella Franks Faallo u dhaaf
Maslow heerkiisa kala sareynta baahiyaha ayaa si cad u sharaxaya heerarka kala duwan ee baahiyaha uu bini'aadamka haysto. Waxa kale oo ay sharraxaysaa sida ay dadku ugu baahan yihiin in loo fuliyo baahiyahaas. Baahiyahani waa kuwo jidheed, amniga, bulsho, ego, iyo isku kalsoonaanta. Burburinta nacnaca waa ciyaar kaa caawinaysa inaad u buuxiso baahiyahaaga bulsheed sida ugu horumarsan ee ragga maanta ay garanayaan. Candy Crush wuxuu kaa caawinayaa inaad ku xirto oo aad la tartanto dadka aduunka oo dhan. Dadku waxay ogaadaan meeqaamkooda caalamiga ah ee ciyaarta. Intaas waxaa sii dheer, Tani waxay soo saartaa tartanka gudahaaga waxayna caawinaysaa koritaanka qof ahaan. Waxay halkan ku bartaan oo ay ku dhaqmaan astaamo laga faa'iidaysan karo nolosha dhabta ah sidoo kale.
Isticmaalayaashu waxay helayaan dareenka lahaanshaha, oo leh heerka caalamiga ah iyo hawlaha kala duwan ayaa kaa dhigaya inaad rabto inaad isku daydo, mar kale iyo mar kale, dhisidda ciyaartoyda isboortiga waxay soo dejiyaan ruuxa gudahaaga waxayna ku siinayaan dareen guul leh. Tani aad bay muhiim u tahay in la awoodo in la qaado guul iyo guuldarada ciyaarta labadaba, laakiin si aan xoogaa kor ugu qaadno dareenka kasbashada waxaan halkan u joognaa inaan ku siino Heerka Nacnaca Crush 677 khiyaamo iyo talooyin.
Heerkan ayaa ujeedadiisu tahay in la helo amarada 10 nacnac xariif ah iyo nacnac isku-dar ah oo xariif ah. Tan oo dhan ma aha markaad tan samaynayso waa inaad dhalisaa ugu yaraan 20,000 dhibcood oo tani ma aha dhamaadka, waxaas oo dhan waa in la sameeyaa si kooban 35 talaabooyinka. Haddii aad fulin karto hadafka heerka adiga oo aan dhaafin xadkaaga guuritaanka, waxaad ku guulaysan doontaa heerka. Waxay u muuqataa mid fudud, ma aha? Hagaag, Ciyaartoyga caadiga ahi waa ogyahay in tani ay u baahan tahay saacado qorshayn oo isku day, iyo guuldarrooyin badan, you will win by chance. Si kastaba ha noqotee, kaa caawin guushaada waanu ku siinaynaa Heerka Nacnaca Crush 677 khiyaamo iyo talooyin si aad heerkan u jejebiso oo aad u sii wado safarkaaga Dhulka Nacnaca ee Saga!
Heerka burburi Candy 677 Khiyaamo iyo talooyin
Hoos ayaa lagu xusay Heerka burburi Candy 677 Khiyaamo iyo talooyin si aad safarkaaga Candy Crush Saga uga dhigto mid fudud oo xiiso leh:
Caqabadda ugu weyn ee heerkan waa Loco rise Xs maadaama ay yihiin kuwa xannibaya nacnacaaga la siibay. Waxaa lagula talinayaa inaadan wakhtigaaga lumin, ama dhaqaaqdo, dhowr meeris. Waa inaad ka saartaa Licorice-ka bidix iyo midig ka dibna aad bilawdo ururinta nacnacyada xariijimaha ah oo aad fuliso hadafkaaga.
Obsession with anything is bad. Especially, xun haddii aan ka hadlayno bambaanooyinka waqtiga ee ciyaarta ka dhex muuqda. Ha ku cadaadin iyaga. Sida xaqiiqda ah, waa qayb ka mid ah caqabadaha. Just go with it, bal u isticmaal si caqli-gal ah. Waxaa intaa dheer, ku rid combos kala duwan, oo soo saar nacnac badan oo aan khusayn intii suurtogal ah.
Isticmaal xirfadahaaga maaraynta iyo qorsheynta, kala qaybso dhaqdhaqaaqaaga iyo waqtigaaga. Celcelis ahaan, dhaqaaq kasta 3aad waa inaad heshaa nacnac xariijisan, Hadda tani waa inay noqotaa ujeeddada ugu yar. Si loo kordhiyo ixtimaalkaaga inaad guulaysato: isku day inaad ka saarto baloogyo badan gobolka hoose ee guddiga. Hence this would start a chain reaction resulting in a higher probability of getting combinations of striped candies.